FITSARANA AVO : Dosie 15 isa nahavoasaringotra Minisitra teo aloha no efa voadinika
Nanomboka tany amin’ny taona 2018 no efa nanao ny asany ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana avo na ny “Haute cour de Justice” (Hcj). 22 janvier 2020
Mbola tsy feno ireo mpikambana tamin’izany saingy niroso hatrany amin’ny andraikiny ireo mpitsara. “ Na tsy mbola feno aza ny mpikambana nandrafitra ny Hcj na Fitsarana Avo, efa niasa foana izahay tamin’ ny alalan’ ny Fampanoavana”, hoy ny filohan’ ny Fitsarana Avo. Araka ny fanazavana noentiny dia efa nisy ireo antontan-taratasy voarain’izy ireo tamin’izany. Nahatratra hatrany amin’ny 15 ny isan’ireo dosie tonga teo am-pelatanan’izy ireo. Antontan-taratasy izay mahavoatonontonona Minisitra sy tompon’andraiki-panjakana teo aloha.
“ Dosie miisa 15 izay mahavoatonontonona minisitra teo aloha no efa tonga eo am-pelatanan’ ny Fitsarana Avo. Efa vita ny fandinihana ireo antontan-taratasy ka hita fa azo raisina ary efa lasa any amin’ ny Antenimieram-pirenena ny 12 amin’ ireo mba handraisan’ izy ireo fanapahan-kevitra na tokony henjehina na tsia ilay olona ambony voalaza fa nanao heloka mifandraika amin’ ny andraikitra nataony ”, hoy ny fanazavana voaray. Araka izany dia anisany tompon-teny farany amin’ny hanenjehana na tsia an’ireo olona ambony voatonontonona tao anatin’ilay raharaha hanenjehana azy ireo Solombavambahoaka.
Heverina fa tsy hisy ny fijerena tavan’ olona ao anatin’ny fanomezana sazy ho an’ireo nitsivalam-pandry tamin’ny fitantanana ny firenena. Anisany laharam-pahamehana apetraky ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny ady amin’ny tsy matimanota. “Miandry ny fivoriana ara-potoanan’ ireo Solombavambahoaka izany ny handinihana ireo dosie miisa 12 ireo. Rehefa eken’ ireo Depiote ny fanenjehana ilay olona ambony dia miverina eny amin’ ny Hcj ny dosie ary aorian’ izay vao mitohy ny famotorana ary mizotra mankany amin’ ny Fitsarana”, araka ny fanazavana hatrany.
Feno tanteraka ankehitriny ny isan’ ireo mpikambana handrafitra ny Fitsarana Avo. Rafi-pitsarana mahaleo tena natao hanenjika ireo tompon’andraiki-panjakana ambony eto amin’ny firenena. Vita soa aman-tsara omaly tetsy amin’ny Fitsarana Tampony Anosy ny fianianana teo amin’ ireo enina miandahy voafidy handrafitra izany, ka avy hatrany dia mandray ny asany izy ireo. Lehilahy ny efatra amin’ izy ireo ary efatra ny vehivavy. Heverina fa hampisy arofanina lehibe eo amin’ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny harem-pirenena ny fitsanganan’ity rafi-pitsarana hisahana ny olona ambony ity.
Hatramin’ny ela no efa nandrasan’ny vahoaka ny hitsanganan’ny Hcj saingy tsy nataon’ny fitondrana teo aloha ho laharam-pahamehana izany. Ny tsy fisian’ity Fitsarana avo ity hatramin’izay anefa no anisany mahatonga ireo tompon’andraiki-panjakana sasany teo aloha manao ampihimamba ny volam-bahoaka sy manao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Araka ny voalazan’ny lalàna dia tsy azo enjehin’ny Fitsarana tsotra izy ireny. Ny Fitsarana Avo irery ihany no manam-pahefana hitsara ny mpitondra. Hatramin’izay tokoa mantsy dia ny olona ambany fifehezana hatrany no mibaby ny sazin’ny tsy fanarahan-dalàna nisy fa ireo tompon’andraikitra ambony dia afaka madiodio.
“Nimenomenona ny olona hatramin’ izay ny amin’ ny tsy mbola fitsanganan’ ny Hcj. Misy ireo efa migadra amina raharaha iray kanefa misy tompon’ andraikitra ambony voarohirohy amin’ izany mbola miriaria”, hoy ny Minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques. Ho fametrahana ny fanjakana tan-dalàna ary tsy hisian’ny tsy matimanota eto amin’ny firenena intsony dia nataon’izao fitondrana izao ny fananganana ny Fitsarana avo.
Rangahy manodidina ny 40 taona tratram-badiny nanolana zaza valo taona TOAMASINA (134) 28 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (99) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (98) 26 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (73) 28 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (63) 28 mai 2020 Nirefodrefotra ny basy teny Ampanefy, jiolahy 3 azo sambo-belona FANAFIHANA (57) 26 mai 2020